[14 / 02 / 2020] Ndị na-ahụ maka ụgbọ oloko Railway III agba izu	06 Ankara
[14 / 02 / 2020] Mersin Metro prequalification Tender yighara maka ụbọchị 20	33 Mersin
[14 / 02 / 2020] Sistemụ Rail Systems ga-adị na Tebụl na Ankara	06 Ankara
[14 / 02 / 2020] Konya Metro, Konyaray, Ring Road na Logistics Center na Mmemme Investment na 2020	42 Konya
[14 / 02 / 2020] Bursa bu ụzọ obodo 2 n'ime afọ abụọ nke ọgba aghara	16 Bursa
:Bọchị: Jenụwarị 18, 2020
N’ikwekọ na mkpebi nke Gọvanọ nke Istanbul, Osmanbey ọdụ nke M2 Yenikapı-Hacıosman metro line ga-emechi ka ọ rụọ ọrụ n’etiti elekere 12: 00-16: 30 echi. O kesara mkpebi nke Governorship of Istanbul si na akaụntụ akaụntụ Istanbul Istanbul. nkekọrịta [More ...]
Na mmekorita ya na Kocaeli Metropolitan Municipal na Obodo Kartepe, ememme snow nke afọ a, nke emere na Sisli Ndagwurugwu na Maşukiye na Kartepe, kwụsịrị site na ihe omume. Obodo Kocaeli na-ekere òkè na ihe omume ahụ [More ...]
Ọkụ gbara na metrobus site na Zincirlikuyu rue Beylikdüzü na Istanbul. Ka ọkwọ ụgbọ ala ahụ kwụsịrị, driverağlayan kwụsịrị, onye hụrụ na anwụrụ ọkụ si n'akụkụ njin ụgbọala ahụ kwụsịrị metrobus meghee ụzọ ma chụpụ ndị njem. Injin nke metrobus [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan gara ememe izizi ụzọ ụgbọ oloko nke Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project, nke ga-ebu ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Turkey mbụ "ngwa ngwa Metro" uche, Gayreteppe si Istanbul Airport [More ...]
KarFest, nke a haziri na Kocaeli Metropolitan Municipal na Obodo Kartepe ga -emekwa ihe omume na ihe ngosi na Kartepe, adreesị ebe njem nlegharị oyi, malitere na Sisli Valley. Arụrụ ọrụ dj na-agaghị echefu echefu, ọkụ laser [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan mere nyocha na Galataport Project. Onye isi ala Erdoğan si ebe obibi ya na Kısıklı kwaga Galataport Project na Beyoğlu. Nata ozi gbasara oru ngo na-aga n’ihu, Erdogan, Onye isi oche nke Doğuş Group na [More ...]
Onye isi obodo nke Keçiören, Turgut Altınok, kwupụtara na usoro izizi nke afọ agụmakwụkwọ 2019-2020 bụ n'efu maka ụmụ akwụkwọ niile na njem gaa World World. N’ozi ya, Onye isi Altınok kwuru, “N’oge agụmakwụkwọ niile [More ...]
Na Gaziantep, ebulitere ọnụ ahịa ụgbọ njem ọha na-eji nwayọ. Ndi Gaziantepist mutara udi nke biara n’enweghi onye obula kwuru mgbe ha bara n’ogbe njem. Tiketi zuru ezu na bọs ọha nke onwe dị ka nke January 18 (taa) [More ...]
Nhicha nke nkuku na inzmir Ọdụ Publicgbọ njem Ọha na Publiczmir
Mkpocha na ihe ndị na-emebi emebi nke ụgbọ njem ọha na eze na-ejikọ na İzmir Obodo ukwu na-aga n'ihu n'akwụsịghị akwụsị. A na-anwalekwa ịgbasa ọrịa nje, nke na-abawanye karịsịa n'oge oge oyi, site na ọmụmụ nhicha. Izmir [More ...]
Clọ Ọrụ TC Güney Marmara (GMKA) bụ ụlọ ọrụ mmepe mpaghara guzobere na Mpaghara Ntuliaka nke22 (Balıkesir, Çanakkale); Isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nọ na Balıkesir. Maka lọ Ọrụ ahụ, “Ndị ọrụ ndị Minista Nọmba 2 jikọtara ọnụ, ndị ọzọ metụtara ya [More ...]
Gaziantep ma ga-eji ẹdude 49 kilometa akara n'etiti Republic of Turkey Nizip Raybüs State Railways malitere anwale ha ịkwọ ụgbọala. Raybüs, onye mezuru usoro nnwale ahụ n’ụzọ gara nke ọma site na site na Gaziantep na mpaghara Nizip n'ahịrị dị, Nizip [More ...]
TCDD ga-asọmpi na Ngalaba Onwe ya na Ragbọala Kemgbe 2021
Emegheri bọtịnụ ahụ iji mepee ụzọ ụgbọ oloko na ụlọ ọrụ nzuzo site na ọmịiko. SözcüDabere na akụkọ banyere Erdoğan Süzer; “Mgbe ụgbọ okporo ígwè na-agafe n'ụzọ ụgbọ oloko, njem ndị njem na-apụ iche. [More ...]
N'agbanyeghị eziokwu ahụ na Gọvanọ Karatük Fuat Gürel bidoro ije dịka ngwụcha izu ụka gara aga, ọ bụ na Keltepe Ski Center, nke butere oke mmasị site na puku ụmụ amaala si na Karabüklü na ógbè ndị ọzọ nke mpaghara ahụ. [More ...]
152 Bgbọala ndị ọzọ ga-esonye na ESHOT Fleet N’afọ a
Mlọ Ọrụ Obodo Obodo Izmir n’otu jikọrọ ọnụ zụta ụgbọ ala 52 dị iche iche maka njem ọhaneze. N’ihi ya, ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala ndị a ga-etinye na njem ọha na eze rịrị elu 152 n’afọ a. Obodo Izmir n’obodo 2020 [More ...]
Industrylọ Ọrụ Nlepụta Ngwaọrụ Mexico
Mersin Metro prequalification Tender yighara maka ụbọchị 20
Antalya 3. Usoro Etap Rail Sistem Na-aga n'ihu na Oke Ọsọ
Onye otu BTS gbara n ’ihu nke isi TCDD Exile
Onye isi ala MTB Özdemir: 'Onye nwere ọdụ ụgbọ mmiri nke Mersin'
Mmepụta Alfa Romeo Giulietta Cease?
Dekọọ ụgwọ ọnwa maka onye isi ọhụụ Renault
Mmepe ohuru na Tesla Crash